प्रचण्ड–बाबुरामबीच भएको गोप्य सम्झौता भयो लिक, उपेन्द्र यादवको गयो सातो ! – GALAXY
प्रचण्ड–बाबुरामबीच भएको गोप्य सम्झौता भयो लिक, उपेन्द्र यादवको गयो सातो !
काठमाडौँ – नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र पूर्वमाओवादी नेता तथा जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच भएको गोप्य सम्झौता भएको खुलेको छ । गोप्य सम्झौता लिक भएपछि जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सातोपुत्लो उड्ने संकेत देखिएको हो ।
माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकता हुने भएपछि प्रचण्ड– बाबुरामले गोप्य सहमति गरेका छन् । सहमति अनुसार बाबुराम एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुने भएका छन् भने आगामी निर्वाचन पछि प्रचण्ड पाँच बर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने भएका छन् ।
यो कुरा जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जानकारी छैन । तर बाबुरामले उपेन्द्रलाई मनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । यसका लागि प्रचण्डले त सार्वजनिक रुपमै छिटो भन्दा छिटो एकता गर्न प्रस्ताव गरिसकेका छन् । प्रचण्डको प्रस्तावमा जसपाले केही सर्त राखेको छ ।
जसपाका प्रभावशाली नेता मनिष सुमनले आफूहरु पनि एकताकै पक्षमा रहेको बताए । तर त्यसका लागि प्रदेशको सिमांकन फेर्न, नागरिकताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
मधेसी जनताका मागहरु सम्बोधन गर्न प्रचण्ड तयार हुनुपर्ने उनले बताए । आफूहरुका यी माग सम्बोधन गर्न प्रचण्ड तयार भए एकीकरण टाढा नरहेको पनि उनले बताए ।
सर्लाहीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता महिन्द्रराय यादवलाई छिटो पार्टी एकता गर्न अपील गरेका थिए । क्षेत्रीय पार्टीबाट मधेसी र पहाडीया जनताको मुक्ति नहुने दाबी गर्दै प्रचण्डले एकीकरण गरेर पार्टीलाई टापु हैन महासागर बनाउन प्रस्ताव गरे
प्रचण्डले पार्टी एकता गरेमा जसपाका नेताहरुलाई सम्मान र अधिकार दिन कुनै कमि नहुने आश्वासन दिए ।पार्टी एकीकरणको प्रस्तावका लागि प्रचण्डलाई धन्यबाद दिदै नेता सुमनले एकता चाहने हो भने मधेसका माग र मुद्दाको सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
अन्यथा एकीकरणको कुरा भाषणमा मात्रै सीमित हुने उनले बताए । प्रचण्डले नागरिकता लगायतका विषयमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीय संवाद गरेर निर्णयमा पुगिने बताएका छन् ।